Indlu enkulu yasefama enamagumbi amabini okulala
Milínov, Plzeň Region, Czechia
Indawo yokuhlala ikwilali entle yaseMilínov, iikhilomitha ezili-15 ukusuka ePilsen. Uya kuxabisa i-terrace yangasese kunye negadi ekwabelwana ngayo kunye nendlu yesibini. Abanini banefama, ngoko ke ngexesha eliphezulu iindwendwe zinethuba lokufuya kunye nokondla iibhokhwe, iigusha kunye neeponi okanye ukujonga amahashe kunye neenkomo. Banokucwangcisa irenti yeponi kubantwana abancinci okanye ukukhwela amahashe. Indawo ikulungele ukukhwela intaba kunye nokuhamba ngebhayisekile kunye nohambo oluya eKozel Castle, Nebílovy okanye iRadyni Castle, kwaye iPilsen ekufutshane ibonelela ngeTechmanie, ZOO okanye iPilsen Brewery.
Le ndlu inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. I-sofa kwigumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala linokwahlulwa libe ziibhedi ezi-2 ezitofotofo. Iindwendwe zinokuqesha indawo yokosa inyama, kwaye kukho nendawo yomlilo egadini.
Simema iintsapho ezinabantwana kwiPilsen ZOO, evavanyelwa kakuhle zizo zonke iindwendwe zethu. Kubantu abadala, sincoma uhambo oluya kwi-Bohemia Sekt operation. Inkampani ibonelela ngohambo ngeentsuku zeveki, unyaka wonke ngamalungiselelo angaphambili.
Ngaphambi kokufika, iindwendwe zifumana i-SMS enekhowudi yokufikelela, ngoko ke zinokuhlala nanini na ngokwamathuba azo. Sihlala eMilínov, ngoko ukuba sisekhaya, siyafumaneka ukuze silungise naziphi na iinkcukacha ezinxulumene nokuhlala.